I-PlexEarth, yintoni ezisa uguqulelo 2.5 kwimifanekiso kaGoogle Earth -Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-PlexEarth, Yintoni eyenza i-2.5 inguqu kwimifanekiso yeGoogle Earth
Ndiye ndacaciswa impawu ukuba i-version entsha ye-PlexEarth izisa, okulindeleke ukuba kwaziswe ngo-Oktobha we-2011.
Esona sizathu siphambili sokuba esi sixhobo sibe nokwamkelwa okubalulekileyo kukuba isombulula eyona nkqubo ithandwayo ye-CAD (i-AutoCAD) engenakuyenza kwelona globhu libonwayo (Google Earth), kwaye iyenza ngendlela ecocekileyo esinayo. ibonwa kumaqonga e-CAD. Eyona intle endiyibonileyo qhagamshela i-AutoCAD ngeGoogle Earth.
Kukuba nakho konke okusemgangathweni kokuqukethwe kwiGoogle Earth kunye nezixhobo zokwakha ezichanekileyo ze-AutoCAD.
Ndiyazi yokuqala yePlexEarth ngoNovemba we2009, ke i-2.0 version NgoMeyi we-2010, emva koko siye sabona utshintsho oluthile, ukuxhasa nje ukuqhuba kwi-AutoCAD 2012 kodwa kwiinyanga ezimbalwa siza kubona i-2.5 version.
Ndaxelelwa ngumbhali wabalweli bayo, endizimisele ukuba ne-intanethi e-Amsterdam ngexesha lenyanga kaNovemba, uphuculo olufakwe kule nguqulo lusekwe ngokusekelwe kwinto "eceliwe" ngabasebenzisi bangoku.
Amandla amakhulu ekunyangeni imifanekiso.
Saye sabona iPlexEarth ngaphambi kokuba senze izinto ezikuphela koko 3D civil okanye i-CivilCAD, kodwa kule ngxaki ivela kunye nekhono ezinokuthi zenziwe kuphela I-Raster Design kwaye oku kunye naluphina uhlobo lwezithombe, kungekhona nje ukungeniswa kwiGoogle Earth.
Hlanganisa imifanekiso (uhlanganise). Ngoku, ungathatha imifanekiso yemifanekiso kwaye uyijoyine ibe negama elitsha kunye nokugcina umxholo.
Ukukhuphela imifanekiso (isityalo). Ukucanda icandelo lomfanekiso ngokusekwe kwi-polygon, ukugcina i-georeference, kwaye ukongeza kwisixhobo esidlulileyo, imifanekiso inokwakhiwa ngokusekwe kwiijometri ezithile, hayi uxande. Ilungele ukususa indawo apho uGoogle Earth engenakho ukugubungela kakuhle.
Faka iifoto (ithatha indawo). Kwimeko apho sikhuphele umfanekiso kwiGoogle Earth, kwaye emva koko sinokufumana ingxelo entsha, sinokucela uhlaziyo lwendawo enye ngaphandle kokuyichaza kwakhona. Ndikwabona okuninzi okunokubakho koku kusebenza, kwimeko apho sifuna ukukhuphela umfanekiso wesisombululo esiphezulu kunye Google Earth Pro, ukuba nangona kunjalo, ukugqitywa kwamaphikseli kungcono xa ungenisa kwi-AutoCAD.
Kwakhona ngoku kunokwenzeka ukuba ungenise kwaye uthumele iimifanekiso ngelixa ugcina i-header georeference header.
Ukuphuculwa kokusetyenziswa kweemodeli zedijithali.
Njengoko ndacacisile kwinqaku lam le-2.0, i-PlexEarth inokungenisa imodeli yedijithali kwiGoogle Earth, ivelise imiphezulu, imigca yokujikeleza, ukubala imiqulu, kunye nezinye izinto ezenziwa yi-Civil 3D. Nangona kunjalo, kukho into engathandekiyo eyenzekayo, yiyo loo nto uGoogle Earth banea el Session Session xa usenza ukhuphelo oluninzi. Oku kulungiswe ngokumangalisayo, isixhobo siyalazi elona nani liphezulu lamanqaku apho iGoogle Earth ivumelayo ukuba ikhutshelwe, kwaye ngaphambi nje kokuba igqitywe, ivala iphinde ivule uGoogle Earth, ngawo omtsha Session Session Ingena ecocekileyo ivumela ukulandwa kwezigidi zeengongoma ngaphandle kwengxaki.
Utshintsho kwifom yelayisenisi
Ngoku ku-PlexEarth, esikhundleni seenguqulelo zonyaka, i-Pro ne-Premium, iintlobo ezintathu zelayisenisi zicetywayo:
Ilayisensi yenyanga, ixabiso eliphantsi. Ngale nto, isidingo seprojekthi ethile sinokuconjululwa, ngaphandle kokuhlawula iphepha-mvume ixesha elide, ukukwazi ukuxhaphaza onke amandla i-AutoCAD ngokwayo enganikeliyo.
Iphepha-mvume lonyaka. Ijolise kubasebenzisi abahlala besebenza kwesihloko, phakathi kophando, ubunjineli, i-geospatial kunye ne-cadastre.
Ilayisensi engapheliyo. Oku kwenzelwa abo bakholelwa ukuba isixhobo siya kufuneka emsebenzini osisigxina.
ESpain unokufumana ilayisenisi CADMax
KwiCzech Republic naseSlovakia onokuthenga kuyo CADStudio
Kwaye e-United States CommTech
KwiLatin America, apha unako Khuphela PlexEarth